Weekend ပရိုမိုရှင်း၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! Weekend ပရိုမိုရှင်း၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ရဖို့£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်း 25 bonus spins on Jungle Spirit. ဒီဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်ကစားသမားဆုကြေးငွေကုဒ်လှည့်ဖျားကို အသုံးပြု. ငွေသွင်းရပါမည်
သို့မဟုတ်ရဖို့£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်း 100% £ 100 အထိအများဆုံးမှတက်ပွဲစဉ်. To receive this bonus the player must deposit using the bonus code BONUS
အပိုဆုရန်ပုံငွေများ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့သိုက်နှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုများ၏ပေါင်းလဒ်သယ်ဆောင် (e.g. £ 10 သိုက် + £ 10 အပိုဆု 30 ရက် = £ 600) ဆုကြေးငွေမတိုင်မီတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်ဆုကြေးငွေတစ်သိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောလျှင်မည်သည့်အနိုင်ရရှိတဲ့အဖြစ်သို့ငွေနှင့်ဤနှင့်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဖြစ်လာမဆိုထပ်မံအနိုင်ရရှိတဲ့ကူးပြောင်းနေကြသည်.
အလှည့်ခြင်းများကနေရရှိခဲ့ပါတယ်အနိုင်ရရှိ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသယ်လိမ့်မည်.
ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများအတွက်တရားဝင်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု 28 နေ့ရကျ. အပိုဆုလှည်တရားဝင်ရှိနေဆဲ7နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.